Wafdi heer wasiiro ah oo loo dirayo xallinta colaadda Hiiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi heer wasiiro ah oo loo dirayo xallinta colaadda Hiiraan
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in wafdi heer wasiirro ah loo dirayo deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan oo ay dagaallo ka dheceen, si ay xabad joojin u dhex dhigaan beelaha dagaallamay.
Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in Cabdiweli Sheekh Axmed uu shalay kulan deg deg ah oo ku saabsan xal u helidda dagaallada soo noq-noqday ee deegaanka Xeefow la qaatay guddiyada golaha wasiirrada ee siyaasadda iyo amniga qaranka.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddiyaasha Golaha Wasiirrada ayaa dhaleeceeyay dagaalka dhex maray labada beelood goor lagu jiro bishii barakaysnayd ee Ramadaan, waxayna ugu baaqeen labada dhinac inay ka fakaraan khasaaraha uu dagaalku u gaysanayo bulshooyinkooda.
Waxaa kulanka lagu soo gabagabeeyay in wafdi heer wasiirro ah loo diro deegaanka si ay u fuliyaan xabbad joojin, labada dhinac ee is haya uga dhex bilaabaan wada heshiisiin iyagoo eegaya arrimaha uu khilaafku salka ku hayo qiimeeynna ugu soo sameeyaan xaaladda banii’aadamnino ee ka jirta deegaanka.
Isagoo ka hadlaya khilaafka, ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli yiri: “Waxaa runtii dhammaanteen aad noo damaqday inaan maqalno dagaalka dhiiggu ku daatay ee dhex maray beelaha walaalaha ah ee ku nool gobolka Hiiraan. Waxaan maanta la kulmay Guddiyada Golaha Wasiirrada ee Siyaasadda iyo Amniga Qaranka waxaanan isku raacnay inaan wafdi heer wasiirro ah u dirno deegaanka si ay u fududeeyaan wada-hadalka iyo nabadeeynta.
“Waxaan ugu baaqayaa walaalaheenna ku sugan Hiiraan inay dhab uga fekeraan dhibaatada ay leedahay in la door bido in dagaal lagu xalliyo khilaafka. Sida kaliya ee lagu xallin karo khilaafka ka jira deegaanka waa wada-xaajood, waxaanan xasuusineeynaa in dagaal naf lagu waayo uusan marnaba xal noqoneeyn.
“Bishan barakeeysan ee Ramadaanka waa waqti loogu tala galay cibaado iyo tawbad, waxaana aan ka murugooday inaan maqlo dhimashada iyo burburka ka dhashay khilaafkan. Aan xasuusanno in dhammaanteen ay dantu noogu jirto inaan wada hadalno oo aan iska afgarano khilaafadkeenna. Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya wax dadaal ah kama hagranayso inay xal nabadeed u raadiso khilaafkan waxayna ugu baaqeeysaa labada dhinac inay si buuxda uga qeyb qaataan dadaallada nabadeeynta.”
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ugu baaqaya hay’adaha gargaarka aadanaha inay wixii kaalmo ah oo loo baahdo u fidiyaan dadka uu khilaafku saameeyay.
9 qof ayaa ku dhimatay 19 kalena way ku dhaawacmeen dagaal beeleed shalay mar kale ka dhacay deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan.